I-Maison Cavuret * * CIR Atlan27200518 - I-Airbnb
I-Maison Cavuret * * CIR Atlan27200518
Iflethi okanye indlu ekwicomplex elungiswe kakuhle kumgangatho wesine enelifti, igumbi eliseluphahleni kodwa eliphakamileyo, ekwindawo entle (iCavoretto), ejikelezwe luhlaza kwimizuzu embalwa ukusuka embindini wesixeko.
Ilungele indawo yeOlimpiki (i-Stwagen Grande Torino kunye ne-PalaAlpitour), indawo ye-Lingotto Fiere, Izibhedlele (Molinette, C.T.O., i-Regina Margherita, i-Sant 'Anna), i-Valentino Park (Umboniso weMoto) .Imizuzu eyi-5 yokuhamba ngeenyawo ungafikelela kwi-Pharmacy, i-Post Office kunye neevenkile ezahlukahlukeneyo.
Iflethi inamagumbi okuhlala amalunga ne-60sqm kunye nekhitshi elincinci, isofa kunye negumbi lokulala elilala abantu ababini kunye negumbi lokuhlambela, inetreyini ekhethekileyo ejongene neTurin kunye neentaba zeOlimpiki.
Ikhitshi elinamathempulethi ashushu, ifriji, umatshini wokwenza ikofu weNespresso, iketile, iMicrowave, isixhobo sokomisa iinwele,
Kungenzeka ukupaka ngokukhululekileyo kwindlela yabucala.
Ndiza kufumaneka kwiindwendwe ngaphambi nangasemva
ixesha lokuhlala kwabo